Okusenza Sehluke - Gumzo
U-Gumzo wasungulwa e-Kenya ngokuziqhenya, yinkapani yeze ICT e-Kenya: I-Usiku Games. Konke ukushaya okwenza kuGumzo kuveza amathuba omsebenzi e-Kenya kuphinde kusekele ukukhula komnotho khona. Yonke inkokhelo ihlala e-Kenya, kanti kulesikhathi se-Covid-19, sinikela u-50% wazo zonke izimali ezakhiwe kwaGumzo ukuqhasa imisebenzi yokulwa ne-Corona kulo lonke izwe.
Sungula i-account yakho mahhala
Kungenjengamanye ama-platfoms, uGumzo akadingi udowlode i-app, noma ukuqhumanisa kuze uhlangane. Konke ukushaya kuka_Gumzo kwenzeka ku-browser, okwenza avele asebenze noakumaphi ama-smartphone noma ama-PC, ngokushesha. Uma umuntu esene-account eyethenjwayo, bangangenela umhlangano ngokuchofoza-nje kanye.
Sinawo onke amathuluzi obuqhwepesha ongawabheka uma ufuna ukwenza imihlangano nge-video. Lokhu kufaka phakathi ukwethula kwi-screen esigcwele, ukunika abanye ama-screen nokuvota ngaso leso sikhathi kwabashayile. Sakha ukurekhoda konke okushiwoyo ngaso leso sikhathi nokubhala lokho okushiwoyo ngenkathi kuhlangenwe, ukuze sivumele ukunikezana ngama-minutes, noma siwagcine njengokwencubo
Imihlangano ye-video ayiseyona-nje yamabhizinisi, kodwa manje imindeni nabangani basebenzisa uGumzo ukuze bahlale beqhumene bakhulumisana. Sakhe izinto ezithokozisayo ezenza uGumzo ehluke kulesikhathi sokuba wedwa sesithukuthezi esingavumi ukuthi kuvakashwe. Abashayile ku-Gumzo bangakwazi ukudlala imidlalo baphinde babheke ama-movies kanyekanye kungathi bahlezi etafuleni elilodwa, okwenza imindeni iqhelelane, ndawonye.